Mampiasa Technorati's API sy PHP | Martech Zone
Asabotsy 24 Febroary 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: March 3, 2007 - Plugin Technorati Rank WordPress navoaka.
Fanavaozana: mazava ho azy fa misy fetran'ny fangatahana isan'andro i Technorati. Hitako ny lalana sarotra, nanakatona ahy izy ireo. Raha nametraka ny widget ianao, dia ho hitanao fa milaza Error miaraka amina rohy miverina mankany amin'ny Pejy Tetikasa mba hahafahanao misintona sy mampiantrano ny kaody anao. Nohavaoziko koa ilay kaody mba hahatratraranao ny anjara isan'andro an'ny API antso, hiova ho rohy "Add to Favorites" fotsiny izy io.
Amin'ny maha-marketer database ahy amin'ny varotra, manana kilema roa aho (okay… mihoatra ny roa, saingy misy ifandraisany amin'ity lahatsoratra ity). Miasa tsara amin'ny tanjona nomerika aho ary miasa tsara amin'ny fandaminana sy fampifanarahana lozika ny tetikasa, olona, ​​rindrambaiko, sns. Na ny bokiko aza voalamina (ny ilany havia amin'ny toeran'ny boky dia rindrambaiko sy fampandrosoana, ny tampon'ny ilany ankavanana dia orinasa, ny ankavanana havanana dia Fiction).
Ny lesoka numerika dia mitazona ahy hijery Technorati, Google Analytics, ary Google Adsense tontolo andro, isan'andro. Techorati dia iray amin'ireo tena nahaliana ahy satria manome ahy izay mifandray amiko. Tiako ny mitsidika ireo tranonkala ireo ary mahita izay lazain'izy ireo na izay hitany fa mahasoa. Raha te hahafantatra na niova ny laharana nataoko na tsia, dia mila manao fikarohana ao amin'ny bilaogiko aho.
Nila zavatra haingana kokoa aho ka nandamina ‘widget’ kely ho an'i Technorati API hahazoana haingana ny laharako. Izy io no tena mampiseho ny laharana eo an-tampon'ity lahatsoratra ity. Raha te hahita ny fomba ianao dia kitiho ny ahy pejy tetikasa izy.
24 Feb 2007 tamin'ny 2:06 maraina
midika ve izany fa izaho no voalohany misaotra 🙂 ary mampahafantatra anao fa tena nindrana an'ity aho 🙂
24 Feb 2007 tamin'ny 8:53 maraina
Mindram-bola ry Steven! Izay no anton'ity blaogy ity.
Febroary 24, 2007 amin'ny 1:25 PM
Nanao fanovana aho izay mampiasa ny logo Technorati kely. Tsara ny fomba nanaovana azy ankehitriny. Nohavaoziko ihany koa ny pejy kaody.
Febroary 24, 2007 amin'ny 1:29 PM
tsara fikasihana 🙂
Asehoko ao amin'ny Widget lahatsoratra momba ny Site Rankings - miaraka amin'ny crédit mazava ho azy 🙂
Febroary 24, 2007 amin'ny 1:38 PM
Oay, crédit lehibe izany! Misaotra indrindra. Aza terena hitazona izany any. Manana fanehoan-kevitra kely aho ao amin'ny HTML izay manondro ny pejin'ny tetikasa.
Febroary 24, 2007 amin'ny 2:45 PM
Namboariko ny haben'ny lahatsoratra LOL mba ho tsara kokoa.
Febroary 24, 2007 amin'ny 6:43 PM
Nohavaoziko ny widget miaraka amin'ny toro-lalana mahafinaritra izay manome antsipiriany fanampiny momba ny laharanao! Ny anaran'ny blôginao (araka ny filazan'i Technorati) ary koa ny rohy miditra sy ny bilaogy!
Febroary 24, 2007 amin'ny 10:22 PM
Haingana izany! Mahazo hadisoana avy amin'ny Technorati aho izao:
Lany ny fanomezanao isan'andro amin'ny fangatahana Technorati API.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, dia nanova ny lahatsoratro eto aho mba hahatonga ny olona hampiantrano ny kaody samirery fa tsy hamely ny tranokalako. Miala tsiny amin'izany ry namana a! Tsy fantatro akory hoe nisy 'fanomezana isan'andro'.
Febroary 24, 2007 amin'ny 10:28 PM
tena mampihomehy Doug 🙂 … oh nahafinaritra ilay izy raha naharitra. Na dia mampiseho laza malaza aza izy io - mety ho nahatsikaritra sy hampihatra zavatra mitovy amin'izany ny Technorati
Febroary 24, 2007 amin'ny 10:43 PM
Manantena aho fa izany koa. Namaky ny tranokalan'izy ireo aho ary tsy hitako hoe inona ilay 'fanomezana isan'andro'. Somary mahasorena.
Nanova ny kaody aho mba handefasana ny hafatra diso toy ny HTML nanehoana hevitra mba tsy hanehoany ny “0” izay taloha. Ankehitriny dia hasehony fotsiny ilay widget raha misy valiny tsara.
Heveriko fa ny safidy tsara indrindra dia ny fampiantranoana ny pejy loharano azonao atao izany. Hataoko ny hafatrao rehefa fantatro ny atao hoe 'fanomezana isan'andro'. Misaotra, Steven!
26 Feb 2007 tamin'ny 12:44 maraina
Ok… fanatsarana bebe kokoa. Raha manandrana mitady URL ianao miaraka amin'ny widget ankoatra ny ahy, dia hilaza aminao izy fa misy hadisoana ary hitondra anao any amin'ny pejin'ny tetikasa. Izany dia mba hahafahanao misintona ny kaody sy mampiantrano azy ny tenanao. Na iza na iza dia afaka mampiantrano ity kaody ity ary amin'izany fomba izany dia tsy hiditra amin'ny fizarana isan'andro amin'ny API ianao.
Nanova azy koa aho ka raha tonga amin'ny Fanomezana isan'andro ianao dia mifindra ho rohy "Ampio amin'ny tiana" fotsiny!
27 Feb 2007 tamin'ny 11:44 maraina
Manontany tena aho hoe ahoana no ataon'ireo Dapper ireo? Angamba indray mandeha isan'andro ihany izy ireo no mijery sy mitahiry ny valiny.
Dapper Screen Scraping ho an'ny tranokala rehetra
Mar 3, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Eny ary ry zalahy! Nosoratako tanteraka ho plugin WordPress ity ary misy cache. Woohooo!
Mar 10, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Hitako ny addon kely anananao ho an'ny Technorati, na dia hitako aza fa tsy nisy cURL natambatra ny server-ko rehefa napetraka ny PHP5.
Ka hojereko raha azoko atao ity iray ity: http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ izay nanampy anao ho an'ireo izay tsy mampiasa PHP5 🙂
Oay, Tyler! Fantatro fa fepetra takiana ny cURL saingy tsy tsapako fa misy olona tsy manana izany ho azy ireo. Noheveriko fa tranomboky nofenoina tamin'ny alàlan'ny fametrahana PHP izany. Maminavina fotsiny aho - fa mino aho fa mampiasa cURL koa i Samanthon.
Sep 10, 2008 amin'ny 3: 44 AM
Misaotra betsaka! Nanampy ahy hamoaka entana izany.
Ankehitriny dia mila manitsy azy fotsiny aho ary tokony ho tonga lafatra
Jul 17, 2009 amin'ny 4: 20 AM
Sao mba misy mahafantatra hoe inona ny tena fetra? Vao avy nahita ny fomba sarotra ihany koa aho nanandrana fampiharana 🙁
Jul 17, 2009 amin'ny 4: 24 AM
Oh vao fantatro fa 1000… oops, tena nanao fanontaniana 1000 ve aho androany?
Jolay 17, 2009 amin'ny 12:02 PM
guitarnoize - aza hadino ny mametraka karazana mekanika caching mora